यो पढौँ कोकाकोला पिएको १ घण्टासम्म मानव शरीरमा के कस्तो रिएक्सन हुन्छ ? – Etajakhabar
यो पढौँ कोकाकोला पिएको १ घण्टासम्म मानव शरीरमा के कस्तो रिएक्सन हुन्छ ?
एजेन्सी– सफ्ट ड्रिंक्ससँग जोडिएको एउटा समाचारले विश्वमा खलबली मच्याएको छ । ब्रिटेनका पूर्व फार्मास्टिक नीरज नाइकले आफ्नो एक ब्लगमा कोल्ड ड्रिंक्स खाएपछि शरीरको भित्र हुने प्रभावका बारेमा केही कुरा बाहिर ल्याएका छन् । उनले यस ब्लगमा कोकाकोला खाएको १ घण्डासम्म शरीरमा के–के हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छन् ।
डेली मेलका अनुसार नाइकले एक ग्राफिकका माध्यमबाट बताएका छन् कि कोल्ड ड्रिंक्सले शरीरको आवश्यक खनिज पदार्थ बाहिर ल्याउँछ र मानिस मानसिक र शारीरिक रुपमा बदलिन थाल्दछ ।
६० मिनेछपछिः खाएको १ घण्टापछि तीन प्रक्रिया हुन्छ । १. फास्फोरिक एसिडले तपाईको शरीरको भित्रि भागमा क्याल्सियम, मेग्निसियम र जिंकलाई एकस्थानमा जम्मा पार्छ । जसका कराण मेटाबोजिल्म बढ्छ । चिनी र अन्य आर्टिफिसियल मिठासको बढ्दो मात्राका कारण मेटाबेल्जिक अरु बढ्छ । यसपछि मानिस पिशाब फेर्न जानछन् र केल्सियम बाहिर निक्लिन्छ ।
३. जसरी यो प्रक्रिया हुन्छ । मिठोपनको असर बढ्दै जान्छ । अनि तपाई अल्छी बन्न थाल्नुहुन्छ । कोकमा भएको पानी यूरिनद्धरा बाहिर निक्लन्छ । यसरी कोक पिउनाले तपाईको हडडी र दाँतलाई आवश्यक पर्ने खनिज बाहिर निक्लिन्छ ।-dainikonline.net बाट ।।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १८, २०७४ समय: १७:२३:३८
१३ वर्षीय निर्मला पन्तको न्यायका लागि धर्ना बसेका उनका आमाबुबा बिरामी